Nepal Online Patrika राेचक तथ्यहरु “जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न न सके एक शेयर अबश्य गर्नु होला ! भिडियो...
नेपाल अनलाइन पत्रिका | काठमाडौं। “जे बर मागे पनि पुग्ने, यो कस्तो अनौठो शक्ति! एकपटक पुग्नै पर्ने दर्शनको लागी! पुग्न नसके स्वरुप एक सेयर अबश्य गर्नु होला” जिन्दगीमा एकपटक पुग्नै पर्ने मन्दिर ,सायद भन्दा खेरी हजुर हरुलाई बिश्वास लाग्दैन होला, तर यस मन्दिरमा आयर मागेको वर पूरा हुने बिस्वाश गरिन्छ।